Maxaabiis Itoobiyaan ah oo lagu eedeeyay dab dad badan horay u laayay - BBC Somali
Maxaabiis Itoobiyaan ah oo lagu eedeeyay dab dad badan horay u laayay
Lahaanshaha sawirka ESAT
Image caption TV ka hawlgala meel ka baxsan Itoobiya ayaa muuqaalkan baahiyay
Maxkamad ku taalla dalka Itoobiya ayaa ugu yaraan 38 maxaabiis ah ku soo oogtay in ay ka dambeeyeen dab maxaabiis badan oo kale laayay bishii September.
Xukuumaddu waxay sheegtay in labaatan maxaabiis ah ay ku dhinteen dabkii ka kacay xabsiga Qilinto oo ku yaalla duleedka magaalada Addis Ababa, kaas oo markaas ay ku jireen boqolaal ka mid ah dadkii ku mudaaharaadayay dawladda iyo waliba siyaasiyiin caan ah.
Macluumaadka ku saabsan wixii dhabta ahaa ee dabkaa dhaliyay ayaan wali faahfaahin badan laga haynin, dacwadan lagu soo oogay maxaabiistana waxay lidi ku tahay wixii ay markii hore sheegtay dawladdu.
Bishii September dawladdu waxay sheegtay in 23 maxaabiis ah ay u dhinteen cabur ama neefta oo ku dhagtay.
Laakiin warqadda dacwadda maxkamadda ayaa muujinaysa in maxaabiista dhimatay la jidh dilay ka hor intii aan la gubin.
38 kale oo dheeri ah ayaa lagu eedeeyay handadaad iyo in ay isku dayeen in ay maxaabiista kale u qortaan ururo la mamnuucay oo uu ka mid yahay Al Shabaab.
Qaar ka mid ah mucaaradka iyo ururrada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa muran ka keenay cadaymaha ay dawladdu keentay waxayna sheegeen in qaar kamid ah maydadka ay xabbad ku taalay.
Dawladda Itoobiya ayaa bishii hore ku dhawaaqday lix bilood oo xaalad dagdag ah si ay si ay wax uga qabato mudaaharaadyo dawladda lagaga soo horjeeday oo muddo sanad ku dhaw socday, kuwaas oo ay wadeen labada qawmiyadood ee Itoobiya ugu badan.
Image caption Muddo sanad ku dhaw Itoobiya waxaa ka socday mudaaharaad dawladda lagu diidan yahay